ခန္ဓာကိုယ် ဘေးသားအဆီတွေ လျော့ချဖို့ နည်းလမ်း ၁၀ ခု – Gentleman Magazine
ခန္ဓာကိုယ် ဘေးသားအဆီတွေ လျော့ချဖို့ နည်းလမ်း ၁၀ ခု
ထိုင်ထ၊ နှလုံး လေ့ကျင့်ခန်း၊ Dumbbell တွေ မျိုးစုံသုံးပြီးပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးရွားတဲ့ ဝမ်းဗိုက် ဘေးသားအဆီတွေကို မလျော့ချနိုင် ဖြစ်နေပါသလား?? ဒီမှာ ဘေးသားအဆီတွေ လျော့ချဖို့အတွက် လွယ်ကူလျင်မြန် အကျိုးသက်ရောက်မှု များတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း ၁၀ ခုကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အိပ်မက်ထဲက Body ကို ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို လုပ်ကြည့်ပါ။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို တစ်ပါတ် တစ်ခေါက် လုပ်ရမှာဖြစ်ပြီး သင့်စိတ်ကြိုက် တချို့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလဲ ပေါင်းစပ် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ တခြား ပြင်းထန်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလဲ တစ်ပါတ်ကို သုံးကြိမ် လုပ်ပေးသင့်ပြီး အဆီကျစေမယ့် အစားအသောက် ပုံစံနဲ့ စားသင့်ပါတယ်။
ဆယ်ပေါင်တူ ကို ဘယ်လက်နဲ့ အဖျားပိုင်း၊ ညာလက်နဲ့ ခေါင်းပိုင်းက ကိုင်ပါ။ ပြီးရင် တူ ကို ခေါင်းပေါ်မြှောက်ပြီး ညာဘက် ပခုံးပေါ်ကလွှဲကာ ထင်းခွဲသလို ဖြည်းဖြည်း ပိုင်းပါ။ ဘယ်ညာ ပြောင်းလုပ်ပါ။
2. Running Planks
ဖျာပေါ်မှာ ခြေနှစ်ချောင်းကပ်ပြီး မှောက်နေပါ။ သင့်ကိုယ်လုံးကို ဒိုက်ထိုးသလို ကြွပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကို လက်မောင်းနဲ့ခြေမမှာပဲ ထပါ။ တစ်ကိုယ်လုံး ဖြောင့်တန်းနေပါစေ။
သင့် ခြေနှစ်ချောင်းနဲ့ ဝိတ်တန်းရှေ့မှာ ရပ်ပါ။ သင့် ခြေတွေဟာ ပခုံးထက် ပိုကျဉ်းနေရပါမယ်။ တန်း ကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကိုင်ပြီး ခြေသလုံးနဲ့ တန်းနဲ့ထိတဲ့အထိ ဒူးကွေးပါ။ တန်းကို ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ကပ်ပြီး မပါ။ သင့်ရဲ့ တင်ပါးနဲ့ ဒူးတွေ လှုပ်လို့မရတော့တဲ့နေရာထိ မပါ။
4. Hanging Lag Rises
တန်းတစ်ခုကို ခိုနေပါ။ သင့်ရဲ့ ဗိုက်ကြွက်သားတွေကို သုံးပြီး သင့်ရဲ့ ခြေထောက်ကို တန်းနဲ့ ထိတဲ့ထိ ထောင်ပါ။ ခြေထောက် ဆန့်ထားပါ။
5. Battle Rope Waves
ခြေကို တင်ပါးလောက် ခွဲပြီး ရပ်နေပါ။ ခြေထောက်တွေနဲ့ တင်ပါးကို နည်းနည် ကွေးထားပါ။ ကြိုးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကိုင်ထားပါ။ နည်းနည်းလေး ထိုင်ပြီး ကြိုးခုန်လိုက်ပါ။
ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ကွေးပြီး ထိုင်ပါ။ အလေးတစ်ခုခု မထားတဲ့ လက်တွေကို ရှေ့ကို ဆန့်တန်းထားပါ။ ခါးကို ၄၅ ဒီဂရီ ကွေးလိုက်ပါ။ သင့်ရဲ့ လက်မောင်းတွေကို တစ်ဖက်ကနေ တစ်ဖက်ကို လှည့်လိုက်ပါ။ သင့်ရဲ့ ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းပါ လည်သွားပါမယ်။ ခြေမကြွမိပါစေနဲ့။
7. Box Jumps
ခြေနှစ်ဖက်ကို ပခုံးအကျယ်လောက် ခွဲပြီး သေတ္တာတစ်လုံးရှေ့ရပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဒူးကွေး အားယူပြီး သေတ္တာပေါ်ကို ခြေစုံ ခုန်တက်လိုက်ပါ။
8. Two-Handed Kettlebell Swing
မတ်မတ်ရပ်ပါ။ လက်ကိုင်ကို နှစ်ဖက်ကိုင်ပြီး ရှေ့ကို ဆန့်ထုတ်ထားပါ။ ဒူးကွေးပြီး နည်းနည်းလေး ထိုင်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Kettlebell ကိုယမ်းပြီး ခါးကို ရှေ့ကို ခုန်ထွက်လိုက်ပါ။
9. Kneeling Vacuum
ဒူးထောက်ပြီး တင်ပါးကို ဖနောင့်ပေါ်ထား ထိုင်နေပါ။ လက်တွေ ဘေးချထားပါ။ သင့်ရဲ့ ပခုံးတွေကို နောက်ကိုဆွဲပြီး ဗိုက်ကြွက်သားတွေကို အထဲကိုရှုံ့သွင်းလိုက်ပါ။ ဒီတိုင်း စက္ကန့် ၂၀ နေပေးပါ။ ပြီးရင် ၂ စက္ကန့်လောက် ပြန်လွှတ်ပါ။ အဲဒါကို နောက်တစ်ခေါက် ထပ်လုပ်ပါ။
10. Jumping Burpee
မတ်မတ်ရပ်ပါ။ ဒူးနဲ့ ခါးမှာ ကွေးထိုင်ပြီး လက်ဝါးနှစ်ဖက်ကို မြေကြီးနဲ့ ကပ်လိုက်ပူ။ ခြေထောက်တွေကို နောက်ပြန်ကန်လိုက်ပါ။ မှောက်လျက် ဖြစ်သွားပါမယ်။ ခြေထောက်တွေကို ပြန်ဆွဲပြီး ပြန်ထိုင်ပါ။ ပြီးရင် ခုန်ထလိုက်ပါ။ ခြေနှစ်ဖက်နဲ့ ပြန်ကျပါစေ။
ခန်ဓာကိုယျ ဘေးသားအဆီတှေ လြော့ခဖြို့ နညျးလမျး ၁၀ ခု
ထိုငျထ၊ နှလုံး လကေ့ငျြ့ခနျး၊ Dumbbell တှေ မြိုးစုံသုံးပွီးပမေယျ့ ခန်ဓာကိုယျ ကနျြးမာရေးအတှကျ ဆိုးရှားတဲ့ ဝမျးဗိုကျ ဘေးသားအဆီတှကေို မလြော့ခနြိုငျ ဖွဈနပေါသလား?? ဒီမှာ ဘေးသားအဆီတှေ လြော့ခဖြို့အတှကျ လှယျကူလငျြမွနျ အကြိုးသကျရောကျမှု မြားတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျး ၁၀ ခုကို ဖျောပွထားပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ အိပျမကျထဲက Body ကို ရယူပိုငျဆိုငျနိုငျဖို့ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးတှကေို လုပျကွညျ့ပါ။
ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးတှကေို တဈပါတျ တဈခေါကျ လုပျရမှာဖွဈပွီး သငျ့စိတျကွိုကျ တခြို့လကေ့ငျြ့ခနျးတှကေိုလဲ ပေါငျးစပျ လုပျဆောငျနိုငျပါတယျ။ တခွား ပွငျးထနျတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတှကေိုလဲ တဈပါတျကို သုံးကွိမျ လုပျပေးသငျ့ပွီး အဆီကစြမေယျ့ အစားအသောကျ ပုံစံနဲ့ စားသငျ့ပါတယျ။
ဆယျပေါငျတူ ကို ဘယျလကျနဲ့ အဖြားပိုငျး၊ ညာလကျနဲ့ ခေါငျးပိုငျးက ကိုငျပါ။ ပွီးရငျ တူ ကို ခေါငျးပျေါမွှောကျပွီး ညာဘကျ ပခုံးပျေါကလှဲကာ ထငျးခှဲသလို ဖွညျးဖွညျး ပိုငျးပါ။ ဘယျညာ ပွောငျးလုပျပါ။
ဖြာပျေါမှာ ခွနှေဈခြောငျးကပျပွီး မှောကျနပေါ။ သငျ့ကိုယျလုံးကို ဒိုကျထိုးသလို ကွှပွီး ကိုယျအလေးခြိနျကို လကျမောငျးနဲ့ခွမေမှာပဲ ထပါ။ တဈကိုယျလုံး ဖွောငျ့တနျးနပေါစေ။
သငျ့ ခွနှေဈခြောငျးနဲ့ ဝိတျတနျးရှမှေ့ာ ရပျပါ။ သငျ့ ခွတှေဟော ပခုံးထကျ ပိုကဉျြးနရေပါမယျ။ တနျး ကို လကျနှဈဖကျနဲ့ ကိုငျပွီး ခွသေလုံးနဲ့ တနျးနဲ့ထိတဲ့အထိ ဒူးကှေးပါ။ တနျးကို ခန်ဓာကိုယျနဲ့ ကပျပွီး မပါ။ သငျ့ရဲ့ တငျပါးနဲ့ ဒူးတှေ လှုပျလို့မရတော့တဲ့နရောထိ မပါ။
တနျးတဈခုကို ခိုနပေါ။ သငျ့ရဲ့ ဗိုကျကွှကျသားတှကေို သုံးပွီး သငျ့ရဲ့ ခွထေောကျကို တနျးနဲ့ ထိတဲ့ထိ ထောငျပါ။ ခွထေောကျ ဆနျ့ထားပါ။
ခွကေို တငျပါးလောကျ ခှဲပွီး ရပျနပေါ။ ခွထေောကျတှနေဲ့ တငျပါးကို နညျးနညျ ကှေးထားပါ။ ကွိုးကို လကျနှဈဖကျနဲ့ ကိုငျထားပါ။ နညျးနညျးလေး ထိုငျပွီး ကွိုးခုနျလိုကျပါ။
ခွထေောကျနှဈဖကျကို ကှေးပွီး ထိုငျပါ။ အလေးတဈခုခု မထားတဲ့ လကျတှကေို ရှကေို့ ဆနျ့တနျးထားပါ။ ခါးကို ၄၅ ဒီဂရီ ကှေးလိုကျပါ။ သငျ့ရဲ့ လကျမောငျးတှကေို တဈဖကျကနေ တဈဖကျကို လှညျ့လိုကျပါ။ သငျ့ရဲ့ ကိုယျအပျေါပိုငျးပါ လညျသှားပါမယျ။ ခွမေကွှမိပါစနေဲ့။
ခွနှေဈဖကျကို ပခုံးအကယျြလောကျ ခှဲပွီး သတ်ေတာတဈလုံးရှရေ့ပျလိုကျပါ။ ပွီးရငျ ဒူးကှေး အားယူပွီး သတ်ေတာပျေါကို ခွစေုံ ခုနျတကျလိုကျပါ။
မတျမတျရပျပါ။ လကျကိုငျကို နှဈဖကျကိုငျပွီး ရှကေို့ ဆနျ့ထုတျထားပါ။ ဒူးကှေးပွီး နညျးနညျးလေး ထိုငျလိုကျပါ။ ပွီးရငျ Kettlebell ကိုယမျးပွီး ခါးကို ရှကေို့ ခုနျထှကျလိုကျပါ။
ဒူးထောကျပွီး တငျပါးကို ဖနောငျ့ပျေါထား ထိုငျနပေါ။ လကျတှေ ဘေးခထြားပါ။ သငျ့ရဲ့ ပခုံးတှကေို နောကျကိုဆှဲပွီး ဗိုကျကွှကျသားတှကေို အထဲကိုရှုံ့သှငျးလိုကျပါ။ ဒီတိုငျး စက်ကနျ့ ၂၀ နပေေးပါ။ ပွီးရငျ ၂ စက်ကနျ့လောကျ ပွနျလှတျပါ။ အဲဒါကို နောကျတဈခေါကျ ထပျလုပျပါ။
မတျမတျရပျပါ။ ဒူးနဲ့ ခါးမှာ ကှေးထိုငျပွီး လကျဝါးနှဈဖကျကို မွကွေီးနဲ့ ကပျလိုကျပူ။ ခွထေောကျတှကေို နောကျပွနျကနျလိုကျပါ။ မှောကျလကျြ ဖွဈသှားပါမယျ။ ခွထေောကျတှကေို ပွနျဆှဲပွီး ပွနျထိုငျပါ။ ပွီးရငျ ခုနျထလိုကျပါ။ ခွနှေဈဖကျနဲ့ ပွနျကပြါစေ။
Previous: တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းရဲ့ အကျိုး ၅ ခု
Next: လိုတဲ့အချိန်တိုင်း အသင့်ရှိနေစေဖို့